Nokuti ini, bhuku rino rakatanga muna 2005, apo ndakanga ndichishanda pane zvidzidzo zvangu. Ndakanga achimhanya paIndaneti kuedza, izvo Ndichakupfuurai kukuudza zvose muChitsauko 4, asi ikozvino ndava kukuudzai chimwe chinhu haasi chero dzingaparwe mapepa. Uye, kuti chinhu kuti aitaura achinja sei ndinofunga tsvakurudzo. Rimwe mangwanani, apo ini aitarisa web-Server, ndakaona kuti nenguva isipi vanenge 100 vanobva Brazil vakanga vaiitawo chiedzwa yangu. Izvi kwakakanganisa kwandiri. Panguva iyoyo, ndaiva neshamwari vakanga vachimhanya chetsika yezvirwere kuedza, uye ndaiziva zvakaoma sei vaifanira kushanda rokutsvaka, tarisa, uye kubhadhara vanhu kuita kuedza avo; kana vaigona kumhanya 10 vanhu nezuva rimwe chete, kuti zvakanga zvakanaka mberi. Asi, vane wangu paIndaneti kuedza, vanhu 100 muchirongwa pandakanga akarara. Kuita tsvakurudzo yako paunenge vavete kuti kuridza kungorotawo kuva wechokwadi, asi hazvisi. Kuchinja michina zvakananga Kuchinja kubva analoginen zera kusvika digitaalinen zera-kunoreva kuti tinogona ikozvino unganidza uye ongorora munzanga mashoko munzira itsva. Bhuku rino iri pamusoro kuita evanhu nokutsvakurudza munzira itsva idzi.
Bhuku rino iri, nokuti nzanga mbiri dzakasiyana. Zviri nokuti evanhu masayendisiti kuti kuita zvakawanda date sainzi, uye nokuda Data masayendisiti kuti kuita zvakawanda munzanga nesayenzi. Ndinopedza nguva vaviri munharaunda idzi, uye bhuku iri kuedza kwangu kuunza pfungwa dzavo pamwe chete nenzira Haazorwari ari quirks uye jargon kwerimwe. Akapiwa vemunharaunda kuti bhuku iri, chinofanira kuenda pasina vachiti kuti bhuku rino hakusi kuti vadzidzi uye mapurofesa. Handina ndashanda vamwe muhurumende (panguva US Census Bureau) uye Tech indasitiri (pana Microsoft Research), uye ndinoziva kuti pane mijenya kutsvakurudza inonakidza kuitika kunze kumayunivhesiti. Saka, kana uchifunga zvauri kuita sezvo evanhu tsvakurudzo, ipapo bhuku iri kwamuri, pasinei nokuti basa kana sei unyanzvi imi Parizvino kushandisa.
Tichiri mumazuva munzanga tsvakurudzo ari digitaalinen zera mangwanani, uye ndaona vamwe kusanzwisisana zvokuti dzinokosha uye nevakawanda kuti chinoita zvikuru pfungwa kwandiri kutaura navo pano, mu okutanga. Kubva date masayendisiti, Ndakaona kusanzwisisana maviri chakasviba. Chokutanga kufunga kuti uwane mashoko kwaita anogadziriswa matambudziko. Asi, nokuti evanhu tsvakurudzo isingaguti ruzivo rwangu. Kutaura zvazviri, kuti munzanga pakutsvakurudza mhando itsva data, vachiramba zvakawanda zvakafanana data, sokuti kuva zvikuru. The kusanzwisisa yechipiri chandakaona kubva Data masayendisiti ari kufunga kuti chinzvimbo sayenzi inongova boka chinoshamisira-hurukuro rakamonera pfungwa. Zvechokwadi, sezvo pasocial musayendisiti-dzinonyatsoshanda zvakananga sezvo nyanzvi-Handibvumirani navo kuti; Ndinofunga kuti munzanga sayenzi ane mugove kupa. Smart vanhu vave vachishanda nesimba kuti kunzwisisa maitiro evanhu kwenguva refu, uye zvinoita kusachenjera kufunga uchenjeri anenge aunganidza kubva ichi nesimba. Tariro yangu ndeyokuti bhuku rino ichapa vamwe kuti uchenjeri nenzira iri nyore kunzwisisa.
Kubva evanhu masayendisiti, ndinonakidzwa aonawo kusanzwisisana maviri chakasviba. Chokutanga, Ndakaona vamwe vanhu kunyora-kure rose pfungwa munzanga tsvakurudzo tichishandisa zvokushandisa kubva digitaalinen zera kunobva mashoma mapepa akaipa. Kana uri kuverenga bhuku iri, imi mune zvimwe akatoverenga boka mapepa inoshandisa evanhu vezvenhau mashoko nenzira dziri banal kana zvakaipa (kana zvose). Ndine zvakare. Zvisinei, kwaizova chikanganiso chakakura kugumisa kubva izvi mienzaniso kuti zvose-digital zera munzanga tsvakurudzo kwakaipa. Kutaura zvazviri, unofanira Zvichida kuverenga boka mapepa dzinoshandisa ongororo Data nenzira dziri banal kana zvakaipa, asi iwe haufaniri kunyora-kure tsvakurudzo zvose vachishandisa kuongorora. Nokuti munoziva kuti hakuna kutsvakurudza kukuru chakaitwa ongororo data, uye mubhuku rino, Ndava kukuratidzai kuti panewo kutsvakurudza kukuru kuitwa pamwe zvokushandisa ari digitaalinen zera.
The kwakakurumbira kusanzwisisa yechipiri kuti chandakaona nevamwe. masayendisiti ari kuvhiringidza chipo pamwe nezveramangwana. Pakuongorora munzanga tsvakurudzo ari digitaalinen zera-kutsvakurudza Ndava kurondedzera mubhuku rino-zvakakosha kubvunza mibvunzo miviri mutsauko:
Sei zvakanaka anoita nemanyorero ichi kutsvakurudza basa zvino?
Sei zvakanaka zvichaita nemanyorero ichi kutsvakurudza basa mune ramangwana sezvo mashoko nzvimbo kuchinja uye sezvo nevatsvakurudzi upedzere nguva yakawanda matambudziko aya?
Kunyange zvazvo vanotsvakurudza vakadzidziswa kupindura mubvunzo wokutanga, nokuti bhuku rino, ndinofunga mubvunzo wechipiri kukosha. Ndiko, kunyange zvazvo munzanga tsvakurudzo ari digitaalinen zera hakusati yakabereka hombe, paradigm achichinja zvedzidzo mipiro, mwero kuvandudzika pamusoro digitaalinen zera tsvakurudzo hahusi nokukurumidza. Zviri ichi mwero yokuchinja, kupfuura ano vanochiva kuti chinoita digitaalinen zera tsvakurudzo saka zvinofadza kwandiri.
Kunyange zvazvo ndima yokupedzisira yaiita kukupa mukana pfuma pane imwe kutaurwa nguva mune ramangwana, chinangwa changu mubhuku rino harisi kukutengeserai pamusoro chero chipi zvacho mhando tsvakurudzo. Ini regai pachangu pachake migove muna Twitter, Facebook, Google, Microsoft, Apple kana zvimwe Tech kambani (kunyange zvazvo, nokuda izere kuburitsa, Ndakashanda panguva kana akagamuchira pakutsvakurudza mari kubva Microsoft, Google, uye Facebook). Kana uri kufara kutsvakurudza uri kutozviita: guru, rambai uchiita zvauri kuita. Asi, kana uine pfungwa yokuti digitaalinen zera zvinoreva kuti zvinhu zvitsva uye zvakasiyana zvinogoneka, ipapo ndinoda kukuratidzai avo zvaangaita. Saka, rose bhuku chinangwa wangu kuramba munhu chakavimbika narrator, kukutaurirai dzose dzinofadza nhumbi itsva kunobvira, apo kukutungamirira kure mashoma misungo kuti Ndakaona vamwe vanowira. Ndinovimba kuti ichi chichabatsira kuvandudza tsvakurudzo yako uye kukubatsira nani uongorore kutsvakurudza vamwe.
Sezvo imi kunge wakacherechedza kare, matauriro bhuku iri zvishoma zvakasiyana nemamwe mabhuku zvechikoro. Ndizvo kwemaune. Bhuku rino yakabuda kudzidza musangano kuti vandakadzidzisa pana Princeton muDhipatimendi wemagariro evanhu, uye ndinoda bhuku rino akakunda vamwe simba uye mufaro kubva musangano. Ndainyanya kuda bhuku rino kuti unhu zvitatu: anobatsira, netariro, uye ramangwana vaifarira.
Helpful: Chinangwa wangu kunyora bhuku zvinobatsira kwauri. Saka, ndava kunyora pachena uye zvisina kurongwa manyorerwo. Nokuti chinhu chinonyanya kukosha kuti ndinoda kuratidza ndiyo imwe nzira kufunga evanhu tsvakurudzo. Uye, wangu ruzivo kubva kudzidzisa kunoratidza kuti nzira yakanakisisa kuratidza nzira iyi mafungiro ari kurongwa uye mijenya yemienzaniso.
Vimba: The munharaunda mbiri kuti bhuku rino unogadzirira-munzanga masayendisiti uye mashoko masayendisiti-vane zvitaera zvakasiyana chaizvo. Data masayendisiti vanowanzoremekedza kufara; avanotarisira kuona girazi sezvo hafu zvizere. masayendisiti Social, Ukuwo, vanowanzova zvikuru kutsoropodza; avanotarisira kuona girazi sezvo muhafu. Mubhuku rino, ndava kushandisa netariro matauriro ane mashoko musayendisiti, kunyange zvazvo nokudzidziswa wangu sezvo pasocial musayendisiti. Saka, kana ndiri kupa mienzaniso, Ndava kukuudzai zvandiri kuda pamusoro mienzaniso iyi. Zvino, kana ndiri kuita womuratidza nezvinetso mienzaniso uye ndichaita izvi nokuti hapana tsvakurudzo akakwana-I'm kuenda kuedza kuonesa zvinetso izvi nenzira iri zvakanaka uye netariro. Handisi kuti kutsoropodza nokuda kutsoropodza. Ndiri kuenda wokutsoropodza kuitira kuti ndinogona kukubatsira kusika kutsvakurudza mamwe yakanaka.
Future-zvinangwa: Ndinovimba kuti bhuku rino richakubatsirai kuita munzanga tsvakurudzo achishandisa digitaalinen hurongwa kuti dziripo nhasi uye digitaalinen hurongwa achaitwa akasikwa ramangwana. Ndakatanga kuita kutsvakurudza mhando ichi muna 2003, uye kubvira ipapo Ndakaona yakawanda kuchinja. Ndinoyeuka kuti pandakanga ndiri kuchikoro vanhu payunivhesiti vakafarisa chaizvo pakushandisa MySpace nokuda mumagariro tsvakurudzo. Zvino, kana ndiri akadzidzisa kirasi yangu yokutanga pane zvandinenge akashevedza "web-kwemagariro evanhu tsvakurudzo," vanhu vakafarisa chaizvo pamusoro chaivo nyika dzakadai SecondLife. Ndine chokwadi kuti mune ramangwana zvakawanda chii vanhu vari kutaura nhasi sokuti mano uye yechinyakare. Wemanomano kugara akakodzera mukutarisana nokukurumidza kuchinja uku abstraction. Saka, ichi hachisi kuzova bhuku rinodzidzisa here chaizvoizvo sei kushandisa Twitter API; panzvimbo, kuenda kuva bhuku rinodzidzisa imi sei kudzidza kubva digitaalinen zvisaririra (Chapter 2). Izvi haasi kuzova bhuku anokupai danho nedanho mirayiridzo kumhanya kwakaita Amazon Mechanical Zimbabwe Turk; panzvimbo, kuenda kukudzidzisa sei kugadzira uye kududzira kuedza kuti kuvimba digitaalinen zera kwezvivako (Chapter 4). Kuburikidza kushandiswa abstraction, Ndinovimba izvi richava isingachinji bhuku iri nenguva nyaya.
Ndinofunga ichi ndiyo nguva kunakidza nokusingaperi kuva pasocial mutsvakurudzi, uye ndiri kuenda kuedza kuratidza kuti mufaro nenzira iri chaiyo. Kureva, inguva kutamira mhiri kujeka zvawo pamusoro mashiripiti masimba mashoko matsva. Zviri nguva kuwana chaicho.